IBC 44 တွင် 12G-SDI I / O ဖြင့် AJA သည် Corvid 12 2019G တင်ပို့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja သင်္ဘော IBC 44 မှာ 12G-SDI I / O နှင့်အတူ Corvid 12 2019G
Aja သင်္ဘော IBC 44 မှာ 12G-SDI I / O နှင့်အတူ Corvid 12 2019G
ရေးသားသူအပေါင်းအဖေါ်များအဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် 8K နှင့် Multi-ရုပ်သံလိုင်း 4K I / O ကယ်တင်တတ်၏
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်, IBC ညီလာခံ, 7.C25 (စက်တင်ဘာလ 13, 2019) ရပ် - IBC 2019 မှာ, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ ဒဖြန့်ချိထုတ်ပြန်ကြေညာ Corvid 44 12Gတစ်ဦး 8 လမ်းသွား PCIe 3.0 ဗီဒီယိုနှင့် 12G-SDI I / O ထောက်ပံ့အသံ I / O ပလက်ဖောင်း။ Corvid 44 12G ဆော့ဖ်ဝဲရေးပုံစံအချက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်, passive သို့မဟုတ်တက်ကြွအအေးမျိုးကွဲအပါအဝင်တစ်ဆယ်ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Corvid 44 12G မော်ဒယ်များ High-သိပ်သည်းဆများပါဝင်သည် HD-BNC connectors နှင့်အနိမ့်ပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအမြင့်ပုံစံအချက်များအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်စဉ် Corvid 44 12G BNC မော်ဒယ်များ full-size BNC connectors ပါဝင်သည်။ အားလုံး Corvid 44 12G ကတ်များ 8K / UltraHD2 / 4K ကိုထောကျပံ့ /UltraHD မြင့်မားတဲ့ frame rate ကို, နက်ရှိုင်းသောအရောင်, HDR workflow နှင့်လည်း input ကိုသို့မဟုတ် output ကိုမျိုးစုံကို 4K စီးပေးနိုင်ပါသည်။
"အစဉ်အဆက်အရည်အသွေးမြင့်မားသည့်အကြောင်းအရာအတွက်ကြီးထွားလာစားသုံးသူအစာစားချင်စိတ် 4K နှင့် 8K အတွက်ကယ်နှုတ်တော်မူပိုမိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသတိပေးနေပါတယ်။ Corvid 44 12G, နက်ရှိုင်းသောအရောင်အကြောင်းအရာ created နှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဘယ်လိုမြင့်မားတဲ့ resolution ကိုချောမွေ့ကြောင်းဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်အစွမ်းထက် I / O နည်းပညာ Developers access ကိုပေးကမ်းခြင်း, တစ်ဦးချုပ်အချိန်တွင်ရောက်ရှိ "နစ်ခ် Rashby, သမ္မတ, shared Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ.
Aja ရဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ SDK ကို post မှပုံရိပ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုကနေအထိတောင်းဆိုမှုများအတှကျ MacOS, Window နဲ့ Linux ကိုဖြတ်ပြီးမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် applications များဖန်တီးပေးရန်ကုမ္ပဏီများကဖွင့်, ရှိသမျှ Corvid 44 12G မော်ဒယ်များပါဝါကူညီပေးသည်။
Corvid 44 12G feature ကိုပျေါလှငျတို့ပါဝင်သည်:
12K, UltraHD8, 2K များအတွက် 4G-SDI I / O UltraHD, 2K, HD နဲ့ SD HFR ထောက်ခံမှုနှင့်အတူတက် 8K 60p မှ YUV 10-bit မှာ4မှာ: 2: 2K 12p မှတက် 4: 4: RGB 4-bit မှာ 8 များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ 30,
4x bi-directional 12G-SDI ဆိပ်ကမ်းများနှင့် 1x ကိုးကားစရာခုနှစ်တွင်
16G-SDI ဆိပ်ကမ်းကိုတစ်ဦးလျှင် 12-ရုပ်သံလိုင်း embedded SDI အသံဖိုင်
ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက် 10-bit နဲ့မြစ်အောက်ပိုင်း keyer, 4K resolution ကိုမှတက် supporting
8 လမ်းသွား PCIe 3.0 ပလက်ဖောင်း
Multi-ရုပ်သံလိုင်း 4K I / O အပါအဝင်အဆင့်မြင့် features တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ Aja SDK ကိုလိုက်ဖက်မှု,
Aja SDK ကို v15.2 နှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ယနေ့ box ကိုထဲကထောကျပံ့
Corvid 44 12G မော်ဒယ်များပါဝင်သည်:
အားကောင်းတဲ့ HD-BNC သို့မဟုတ် full-size BNC ဆက်သွယ်မှု
အပေါ် low-profile ကိုဒီဇိုင်း option ကို HDစက်သို့မဟုတ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဆာဗာများတွင်အသုံးပြုရန် -BNC မော်ဒယ်များ
သည် RS-422 အမှတ်စဉ် PCIe bracket ကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်, ဒါမှမဟုတ်ကဒ်အပေါ် header ကို
ကိုးကားစရာ / LTC PCIe bracket ကအပေါ် BNC ကနေတဆင့် input ကို, ဒါမှမဟုတ်ကဒ်အပေါ် header ကို
Aja SDK ကို
Aja ရဲ့ SDK ကို (Software Development Kit) သိပ္ပံ, ဆေးပညာ, လုံခြုံရေး, အာကာသ, စစ်ရေး, Post ကိုထုတ်လုပ်မှု, အသံလွှင့်, Virtual ထုတ်လုပ်မှု, Projection မြေပုံ, အီလက်ထရောနစ်အားကစားနှင့်ပိုပြီးဖြတ်ပြီးယနေ့စျေးကွက်အပေါ်သြဇာအာဏာအရှိဆုံးပုံရိပ်-based ထုတ်ကုန်အချို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ SDK ကို Aja လူသိများသောထူးချွန်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Windows, MacOS နှင့် Linux အပေါ်အတည်ပြု Developers မှရရှိနိုင်ပါသည်။
အားလုံး Corvid 44 12G မော်ဒယ်များ $ 2895 အမေရိကန် MSRP များအတွက် full-size BNC ဗားရှင်းအပါအဝင်ယခုရရှိနိုင်ပါ၏ HDအတူ -BNC ဗားရှင်း HD$ 2995 အမေရိကန် MSRP များအတွက် BNC ကြိုးတွေမှ -BNC; နှင့် HD$ 2895 အမေရိကန် MSRP များအတွက်ကေဘယ်လ်ကြိုးမပါဘဲ -BNC ဗားရှင်း။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.aja.com/products/developer/corvid-44-12g နှင့် www.aja.com/products/corvid-44-12g-bnc.
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC IBC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar ဆူညံသံလျော့ချခြင်း အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome လှံ & Arrows စာတန်းထိုး UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2019-09-13
ယခင်: Aja IBC 6464 မှာ KUMO 12-2019G မိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို